OpenBank inosanganisira Apple Pay gore risati rapera | Ndinobva mac
Mhuri yeApple Pay inokura zvakare kuSpain. OpenBank, yekutanga online bank iripo munyika, yakazivisa kuburikidza neTwitter kuti ichabatanidza Apple Pay senzira yekubhadhara yevatengi vako vese gore risati rapera, kuti vakwanise kuishandisa nekukurumidza, nyore uye zvakachengeteka.
Mukombe weCupertino Ivo vari kuvandudza Apple Pay kufukidza muEurope yose, uye kunyanya muSpain. Vhiki rapfuura, CaixaBank uye ImaginBank vakataura kuti ivo vari kuve chikamu chemabhangi ayo anopa nzira iyi yekubhadhara munyika.
OpenBank ndeyesangano reSantander, pamwe ndosaka mumavhiki apfuura zvichikonzera kuisirwa muboka rakasarudzwa remabhangi anogona kupa Apple Pay kune vatengi vavo, sezvo Banco Santander iri iro bhangi rekutanga kuSpain (neSpanish) kugona kupa tekinoroji iyi.
Kunyangwe zuva racho risati riri repamutemo parizvino, Apple yatove neyakaisirwa OpenBank pawebhusaiti yayo, sebhangi rinotevera kuwedzerwa kune ino "mhuri huru", pamwe nemamwe mabhanga kutenderera pasirese.
Zvinotarisirwa kuti iyi mhando yenhau Zvakare kukonzera kusangana neiyi tekinoroji yemabhangi akakosha muSpain senge mabhangi BBVA, Bankia kana Banco Sabadell, kufambisa nzira yekubhadhara muzvitoro nezvitoro zvakawanda munyika.
Apple Pay inopararira nekukurumidza pakati pemapeji ewebhu, mashopu, masupamaketi, mahotera, maresitorendi uye nzvimbo dzisingaperi dzekutenga ndezve kungounza yedu iPhone, iPad kana Apple Watch kune iyo daphaphone (Uye zvakatonyanya kusununguka kana uchizviita neMac yako kubva kumba!).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » OpenBank ichawedzera Apple Pay gore risati rapera